Banijya News | उच्च रक्तचापः के खाने के नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा - Banijya News उच्च रक्तचापः के खाने के नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा - Banijya News
उच्च रक्तचापः के खाने के नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा
जेठ २६, काठमाडौ ।.
उच्च रक्त चाप अहिले धेरैमा देखिरहेको समस्या हो । विभिन्न कारणले गर्दा यो समस्या डरलाग्दो रुपमा बढ्न थालेको छ । यो बढ्नुको कारण मध्य एक खानपान र अर्को वर्तमान जीवनशैली हो । नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वेले पनि उच्च रक्तचाप नेपालीहरुका लागि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । हिजोआजका मानिसहरुलाई मीठामीठो खानुपर्ने, हप्ताको ४ दिन मासु खानैपर्ने, रक्सी खाने , सुर्तीजन्य तथा अन्य नशाको सेवन गर्नुपर्ने, विभिन्न खाले मानसिक तनावमा रहनुपर्ने बाध्यता, शारीरिक व्यायामको कमी आदिको कारणले गर्दा ब्लडप्रेसरको समस्या बढ्दै गएको छ ।
फलस्वरूप हार्ट अट्याक, प्रेसर हाई, प्यारालाइसिस मुटुरोग जस्ता समस्या देखिन थालेका छन् । ,हाम्रो यहि जीवनशैलीले निकालेको रोग हो, उच्चरक्तचाप अर्थात् ब्लडप्रेसर हाई । पहिले धनीमानी, उमेर भएका रोगले च्यापेकालाई छिटफूट देखिने यो रोग अहिले २० वर्षे ठिटाठिटीदेखि वयस्क, पुरुष मिलामा देखिन थालेको छ । सुन्दै डरलाग्दो यो तथ्य नेपालकै हो । ३० वर्षका युवाले समेत प्रेसर हाई भएको समस्याले नियमित औषधि खानुपर्ने अवस्था छ । ब्लडप्रेसरका कारणमध्ये २ देखि ३ प्रतिशतको मात्रै कारण देखिएको छ । बाँकी ९७ प्रतिशतको कारण पत्ता नलागेको बताईन्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापलाई साइलेन्ट किलर रोग हो । चक्कर आउनु, निद्रा नलाग्नु, मुटुको धड्कन बढ्नु, धड्कन रोकिएजस्तो हुनु, भनभन रीगँटा छुट्नु आँखा हेर्नै गारो हुनु, श्वास रोकिएला झै हुनु जस्ता लक्षण देखिन्छ । यसले पयारालाईसिस जस्तो भयानक रोग निम्त्याउन सक्छ भने हार्ट अटट्याक जस्ता अन द स्पट डेड हुन सक्छ । तर खानापान र जीवनशैलीका कारण निम्तिएको उच्च रक्तचापको समस्या समाधान हाम्रै नियन्त्रणमा छ ।
खानपान र जीवनशैलीलाई परिमार्जन गरेर यो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ । स्वास्थ्यको हिसाबले ननुको मात्रा बढी हुनुलाई राम्रो मानिदैन । यसले गर्दा पनि रक्त चाप बढ्ने हुन्छ । व्यापारिक हिसाबले बनाइएका जंक फुडहरुले पनि रक्तचाप बढाउन मद्दत गर्छन् । किनभने यस्तो खानामा सोडियमको मात्र बढी नै हुन्छ । खाना मिठो होस् भन्ने हिसाबले बनाइएको हन्छ । गुलियो खानेकुरा बनाउँदा पनि सोडियम हालेको हुन्छ । नुनिलो बनाउँदा पनि बढी सोडियम हालिएको हुन्छ । अजिनामोटोमा पनि सोडियम हुन्छ । ससेज, बिस्कुट, क्यान फुडलगायतका खाना उच्च रक्तचाप बनाउन सहयोगी हुन्छन् । चिल्लो बोसो भएको खानाले पनि रक्त चाप बढाउँछन् । शरीरको वजन बढाउने जुनसुकै खाना जस्तै मैदा, ह्वाइट राइस पनि वजन बढाउने गर्छन् । तिनीहरुमा सही पोषण हुँदैन, मिनिरलको सही मात्रा हँुदैन । त्यसैले यस्ता खानाले उच्च रक्र चाप बढाउन मद्दत गर्छ । धुम्रपान र मध्यपानले पनि उच्च रक्तचाप बढाउँछ । त्यसैले यस्तो खानाबाट टाढै बस्नु पर्छ ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न फाइबरयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ । नुनको मात्र कम गर्ने, चिल्लो भएको खानेकुरा कम खाने र डाल्डाबाट बनेका खानेकुरा खाँदै नखाने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । पशुजन्य पदार्थ दूध, दही, घिउ ठिक्क मात्रमा खाने गर्नुपर्छ । उच्च रक्तचाप भइसकेका हरुले औषधिमात्र खाएर खानामा कुनै परिवर्तन गरेनन् भने लाभदायी हुँदैन । त्यसैले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न जीवशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । केरा, सुन्तला, तरकारीमा हरियो सागपात, गेडागुडी, फर्सी, चना खाँदा रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ । सिलाम, तिल, आलस ,फर्सीको बियाँ, ओखर, दूध, दही ठिक्क मात्रामा खाने हो भने रक्तचाप नियन्त्रण हुन्छ । उच्च रक्तचापका रोगीले पर्याप्त मेवा खानुपर्छ । हरेक बिहान खाली पेट लसुनका दुइ पोटी तथा एक गिलास पानी पिउनुहोस् ।
अदुवामा रक्तसंचारलाई सन्तुलित गराउने एन्टीअक्सिडेन्टहरु पाईने भएकोले अदुवाको टुक्रा मुखमा राखिरहँदा पनि फाईदाजनक हुन्छ । आधा गिलास पानीमा एक चम्चा मरीचको धुलो घोल्नुहोस् र केही तताउनुहोस् । चिसो भइसकेपछि २ २ घण्टामा थोरै थोरै गरेर पिउनुहोस् । एक चम्चा मेथीका दानालाई एक गिलास पानीमा मिलाएर उमाल्नुहोस् । त्ससपछि त्यो मेथीपानीलाई चिसो पारेर पिउनुहोस् । १ चम्चा अमलाको रस र एक चम्चा मह मिलाएर हरेक दिन बिहान बेलुकी खाने गर्नाले रक्तचाप कम गर्छ । नियमित एक्सरसाईजहरु गर्नुहोस् । उच्च रक्तचापका रोगीले पर्याप्त निद्रा लिनुपर्छ । करेला, मेथी, नीमको पात, घ्युकुमारी खाने, आर्युेवेदिक उपाय गर्ने, योग, ध्यान गरेर पनि कम गर्न सकिन्छ ।